Iindaba - iShanghai Copak Industry Co., Ltd. IOfisi yokuFundisa eShanghai
I-Shanghai Copak Industry Co., Ltd. iOfisi yokuFundisa eShanghai
I-Shanghai Copak Industry Co., Ltd. iOfisi yokuSebenzisa eShanghai
I-Shanghai COPAK Industry Co, Ltd esekwe ngo-2015, kunye neofisi yokuthengisa eShanghai kunye nomzi mveliso ohambelana nayo eZhejiang. I-COPAK ngumthengisi oqeqeshiweyo we-Eco-friendly yokutya kunye neemveliso zokupakisha zesiselo: Iikomityi ze-PET, iibhotile ze-PET, izitya zephepha, njl.
Iofisi yethu eshanghai ikakhulu ijolise kurhwebo lwamanye amazwe kunye nokufumana ulwazi ngobuchule. Ngaphandle kwe-PET CUPS, Iibhotile ze-PET, i-PAPER BOWLS, sinokuthengisa nezinye iimveliso. Iqela lethu lobuchwephesha lokufumana ulwazi linokufumana imveliso ekumgangatho ophezulu kunye nexabiso lokukhuphisana. Siza kuqinisekisa ukuhlolwa kwe-100% ngaphambi kokuthunyelwa.
Iofisi yethu yaseShanghai iyaqhubeka nokusebenza njengenkqubo elandelayo.
Xa abathengi befuna into esingayivelisiyo (I-PET CUP, I-PET BOTTLE NE-PAPER BOWL zinikezelwa ngumzi-mveliso wethu), siya kujonga zonke iinkcukacha ezifunekayo kubandakanya umbala, imilo, ukusetyenziswa kunye nokuprinta okanye ukupakisha, emva koko siya kufumana imveliso elungileyo yakho kwaye ufumane ixabiso kwimizi-mveliso. Emva kokuthelekisa umgangatho kunye nexabiso, siya kutyelela umzi-mveliso kwaye sivavanye umzi-mveliso kwiinkalo ezininzi ezinje ngemigca yemveliso, amandla emveliso, imeko yemveliso kunye nabasebenzi kunye nolawulo lomgangatho. Emva koko siya kukhetha esifanelekileyo ukuba sisebenzisane. Emva kokuba imveliso yabo igqityiwe, siya kuthumela abahloli bekhwalithi abazinikeleyo ukuba bahlole iimveliso. Emva koko ukuthunyelwa kunokucwangciswa.
Abanye abantu banokukhathazeka malunga nomgangatho. Ngapha koko, senza uvavanyo lwekhwalithi ye-100% ngaphambi kokuthunyelwa. Kwaye kwakhona sinenkqubo yokuqinisekisa esemgangathweni. Ukuba ngokwenene ufumana naziphi na iingxaki kwiimveliso zethu, thumela iividiyo kunye nemifanekiso. Siza kuphinda sithumele iimpahla ezisemgangathweni endaweni yemveliso enesiphene kuwe kwakhona.
Malunga nexabiso, kufuneka libe kukhuphiswano. Sifumene ixabiso emva kokuthelekisa ubuncinci iifektri ezili-15. Asisoze sibe neenzuzo ezininzi. Umgaqo-nkqubo wenzuzo ungaphantsi kwe-10% kuphela. Siqhelene ngakumbi nemakethi yaseTshayina kwaye sinokukufumanela umthengisi olungileyo. Kananjalo ungathenga nantoni na oyifunayo kuthi, akukho mfuneko yokuba uzifumanele abathengisi. Ungazi ukuba ukufumana umthengisi kunzima kwaye akukho lula ukuyifumana.
Abasebenzi bethu banokuthetha isiNgesi, iSpanish, isiArabhu. Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi. Ii-imeyile, ukuncokola kwi-Intanethi, okanye ukufowuna zamkelekile.